Akụkụ Ihe Omume Nke Onwe - WRSP
Akụkụ Ihe Omume Nke Onwe
Mbupu: Oku 911 (1:18 nkeji.)
Mbido nke Waco Branch nke ọdachi Davidian: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụtabeghị? mejupụtara oku 911 abụọ nke ndị David David Bụrụ na February 28, 1993, n'oge na obere oge mgbe ndị ọrụ ATF nwara itinye nnabata. Wayne Martin mere otu oku, a nụkwara David Koresh na oku nke ọzọ.
Nkebi nke 1. Ewebata ndị Ọkammụta Anọ & Isiokwu (20:57 nkeji.)
Nkebi nke 1 nke The Waco Branch Davidian Tragedy: Gịnị Ka Anyị Mụtara ma ọ bụ na Anyị Amụghị? ewebata ndị ọkà mmụta anọ na-ekwurịta esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ gọọmentị etiti na David David nke Alaka na 1993.
Ndị ọkà mmụta anọ ahụ bụ:
J. Phillip Arnold, PhD, Nnabata Institutelọ Ọrụ
James D. Tabor, PhD, Mahadum nke North Carolina na Charlotte
Catherine Wessinger, PhD, Mahadum Loyola New Orleans
Stuart A. Wright, PhD, Mahadum Lamar
Ndị ọkà mmụta anọ ahụ gosipụtara onwe ha, usoro nyocha ha, na otu ha siri tinye aka na nyocha esemokwu dị n'etiti ndị David David nke Alaka na ndị ọrụ gọọmentị etiti na 1993. Ha na-ekwukwa banyere mbido nnọchibido ahụ na Centerlọ Ọrụ Carmel nke David nke Alaka na February 28, 1993 na mwakpo ATF.
Nkebi nke 2. Ewebata ndị David David na David Koresh (10:59 nkeji.)
Nkebi nke 2 nke Waco Branch nke Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụtabeghị? ndị ọkà mmụta anọ ahụ na-ewebata ndị David David, David Koresh, ma kwurịta mwakpo ATF na February 28, 1993 nke mere ka ndị ọrụ 4 ATF nwụọ ma ndị Alaka David 6 nwụrụ, yana ndị ọzọ merụrụ ahụ.
Nkebi nke 3. Firstbọchị mbu nke nnọchibido (Nkeji 4: 39.
Na Nkebi nke 3 nke Waco Branch nke Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụtabeghị? ndị ọkà mmụta anọ ahụ kwurịtara ihe kpatara ndị otu ATF ji họrọ February 28, 1993 iji mepụta nnwale siri ike na Ugwu Carmel Center, ọrụ nke usoro Waco Tribune-Herald nke "The Sinful Messiah", na ụdị nke ebubo mmejọ ụmụaka megide David Koresh nakwa na Ndị Ọrụ Nchebe beenmụaka nyochaworo ha na 1992 ma mechie ikpe ahụ n'ihi enweghị ihe akaebe.
Nkebi nke 4. Olee ndị bụ ndị Alaka David? (29:03 nkeji.)
Na Nkebi nke 4 nke Waco Branch nke Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụtabeghị? ndị ọkà mmụta anọ na-atụle mmalite na akụkọ ihe mere eme nke ndị David David, ndị isi okpukpe na mmegharị metụtara otu David Koresh, nkuzi Koresh sitere na Akwụkwọ Nsọ, ihe ọtụtụ alụm di na nwunye pụtara, mkpa aha Vernon Howell gbanwere David Koresh, ihe ọ kuziiri banyere Akara asaa n'ime akwụkwọ Mkpughe na ọkwa ya dị ka Kraịst maka thebọchị Ikpeazụ. Ndị ọkà mmụta anọ ahụ kwusiri ike na amụma amụma nke Koresh na-esite na nkọwa ya nke Akwụkwọ Nsọ edozighị, nke pụtara na nsonaazụ esemokwu ahụ na ndị ọrụ gọọmentị etiti na 1993 abụghị nke ndị David David nke Akwụkwọ Nsọ ghọtara amụma amụma Akwụkwọ Nsọ ebughị ụzọ kpebie.
Nkebi nke 5. Ntinye aka FBI & Ntọhapụ (22:02 nkeji.)
Na Nkebi nke 5 nke Waco Branch Davidian Tragedy, ndị ọkà mmụta na-atụle ntinye aka nke FBI na mmụba nke ihe omume n'okwu ahụ. Ha na-atụle etu ndị ọrụ FBI si wee iwe, ọkachasị onye ọchịagha saịtị ahụ na ọchịagha ndị nnapụta agbapụ, mgbe Machị 2 David Koresh apụtaghị, dịka o kwere na nkwa, mgbe akpọchara okwuchukwu ya na telivishọn na redio. Mgbe Koresh gwara ndị ọrụ FBI na Chineke gwara ya ka ọ chere, ndị ọrụ FBI na-ebugharị tankị n'elu Ugwu Kamel. Gary Noesner, onye ọrụ FBI nke bụ onye nhazi mkparịta ụka site na Machị 1 ruo Machị 24, mechara dee na ya tụrụ anya na a ga-eweghachi azụ na mkparịta ụka, mana nke ahụ bụ naanị usoro metụtara ịme ka ọtụtụ ndị mmadụ pụta. Ndị ọkà mmụta ahụ na-atụle nghọta mmụta okpukpe nke Koresh banyere ihe omume nke mwakpo ATF na nnọchibido ahụ maka akara asaa nke akwụkwọ Mkpughe, ọkachasị akara nke ise. Ha na-atụle otu ngwaọrụ onyunyo na ụlọ ahụ si bulie ụda nke ndị Alaka David David na-ekwurịta ịnwụ n'ọkụ mgbe David Koresh nwere mkparịta ụka na onye mkparịta ụka na Eprel 18, 1993. A na-anụ mkparịta ụka ndị a banyere ọkụ na igwe onyunyo nyocha, yabụ mkpebi FBI ndị na-eme ya gaara amata mkparịta ụka ndị a. Ya mere, ndị ọkà mmụta ahụ jụrụ ihe kpatara ndị na-eme mkpebi FBI ga-aga n'ihu na mwakpo tank na gas na Eprel 19, 1993 mgbe ha maara na ndị David David nke Alaka na-atụ anya ịnwụ na ọkụ ma ọ bụrụ na ebuso ha agha.
Dr. J. Phillip Arnold na-akọghachi otú njedebe nke March 1993 ọ natara n'ọnụ site n'aka onye nta akụkọ na ndị ọrụ FBI na-akwadebe ime ihe megide Alaka David. Mgbe ahụ ọ jụrụ ihe ya na Dr. James D. Tabor ga-eme iji chekwaa ndụ. Ha gbalịrị iso ndị ọrụ FBI kwurịta okwu, ma ha egeghị ndị ọkà mmụta Bible ntị na-achọ ịkọwara ha banyere nkà mmụta okpukpe.
Nkebi nke 6. Ọrụ nke Okpukpe (22:29 nkeji.)
Na Nkebi nke 6 nke Waco Branch Davidian Tragedy, ndị ọkà mmụta anọ na-atụle mgbalị Dr. J. Phillip Arnold na Dr. James D. Tabor mere iji kọwaa nkọwa ọzọ nke akwụkwọ amụma nke Mkpughe nke ga-enyere David Koresh aka ịpụta ma jide ya ma duputa ndi ozo nke Alaka David, ma di nkpa, mee ka umuaka puta. Mgbe Dr. Arnold natara ozi na ndị ọrụ FBI na-eme atụmatụ mbuso agha megide ebe obibi ndị David David, Dr. Arnold na Tabor mere ndokwa iji kwurịta akwụkwọ Mkpughe na Ron Engelman redio okwu show na Dallas na Eprel 1, 1993. Ha tụrụ aro na David Koresh ga-enwe ike ide akwụkwọ ya banyere amụma ndị a ọbụlagodi mgbe etinyechara ya n'ụlọ mkpọrọ, na hezọ o nwere ike isi zisa ozi ya ma zọpụta ọtụtụ mkpụrụ obi. N'ikpeazụ, ọkàiwu Koresh bụ Dick DeGuerin weere ụda olu nke mkparịta ụka redio ha n'ime ebe obibi wee soro David Koresh na ndị David David ndị ọzọ nọ na-ege teepu ahụ. David Koresh kwere nkwa na ha ga-apụta mgbe ememme ngabiga mechara ụbọchị asaa. Ememme Ngabiga gwụchara n’April 7. N’April 13, 14, Koresh zipụrụ ndị FBI akwụkwọ ozi na-ekwu na Chineke gwara ya ka o dee nkọwa ya banyere akàrà asaa ahụ n’akwụkwọ Mkpughe; mgbe enyere ihe odide a Dr. Arnold na Tabor maka nchekwa, ọ ga-apụta. Ọzọkwa, n'April 1993, Koresh zipụrụ nkwekọrịta a bịanyere aka iji jide DeGuerin dịka onye ọka iwu na-agbachitere ya.
Ndị ọrụ FBI na ndị otu eji agbapụ agbapụta na tankị / Combat Engineering Vehicles (CEVs) nọ na-esogbu ndị David David Alaka, dịka ọmụmaatụ site na ịtụ bọmbụ na-atụ onye ọ bụla bịara n'èzí, gụnyere otu oge mgbe Steve Schneider nwere ikike ịpụta na bulie ihe site n'aka onye ọrụ na CEV. Mkpagbu ahụ mụbara mgbe Koresh na-ede ihe odide ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agbachapụ bọmbụ mgbe ha pụtara n'èzí. Otu CEV kwabara na mgbidi ụlọ ahụ n'isi ụtụtụ Eprel 16, ọ fọrọ nke nta ka ọ merụọ nwoke na-ehi ụra isi ya n'akụkụ mgbidi ahụ. Ka o sina dị, Koresh kọọrọ onye mkparịta ụka na 2: 35am na Eprel 16 na ọ gụchara nkọwa ya na Akpa Mbụ.
Ebe ọ bụ na ndị David David Branch enweghị ọkụ eletrik, ha malitere ịrịọ batrị na cassettes cassettes maka nhazi okwu na-arụ ọrụ batrị ka isi Koresh na akpa akara ahụ wee dee ma zọpụta ya na diski diski. Ndị David David nke Alaka gara n'ihu na-arịọ maka ihe maka nhazi okwu na Eprel 17 na 18. N'ikpeazụ, ezigara ndị David David Alaka na mgbede nke Eprel 18, n'abalị ahụ tupu ndị ọrụ FBI na tank na CS gas na Eprel 19, 1993.
Alaka Davidian Riddle nọrọ n'abalị niile na-ede akwụkwọ Koresh na Akpa Mbụ. Mgbe ọkụ ahụ malitere mgbe etiti ehihie n’April 19, 1993, mgbe awa isii nke ụlọ ahụ gụsịrị ma kpochapụ ya site na CEVs, Ruth Riddle si na windo nke ụlọ ahụ na-ere ọkụ wụpụ na floppy disk na akpa ya. Dr. Arnold na Tabor debere nkwa ha kwere Koresh iji mee ka ndị ọkà mmụta ya nweta nkọwa ya, site na ikesa 6 mkpụrụ na nnọkọ na American Academy of Religion / Society of Biblical Literature ogbako na November 500. E bipụtara nkọwa Koresh na Akpa Mbụ na akwụkwọ akpọ Gịnị kpatara Waco? Ultstù nzuzo na agha maka nnwere onwe okpukpe na America site n'aka James D. Tabor na Eugene V. Gallagher (1993).
Catherine Wessinger rụtụrụ aka na n'ime ndị na-ede akwụkwọ akụkọ lara ezumike nká FBI mkparita ụka Byron Sage ekwuola na ọ bụrụ na Koresh zipụrụ ihe akaebe na ọ na-ede ihe odide ya, ndị FBI agaraghị eburu tankị ahụ na mwakpo gas CS na Eprel 19, 1993. Ọ na-ekwu si na FBI weghachitere ihe ndi ndi David David choro choro ideputa akwukwo nke Koresh na akuko nke mbu rue rue anyasi nke Eprel 18.
Nkebi nke 7. N'agbanyeghị mbọ ndị ọkammụta na-agba, ọdachi adakwasịla (17:38 nkeji.)
Na Nkebi nke 7 nke The Waco Branch Davidian Tragedy, ndị ọkà mmụta na-atụle FBI tank na mwakpo gas gas na ndị David David Alaka na ebe obibi ha na Ugwu Kamel n'èzí Waco, Texas na Eprel 19, 1993. A na-eji Vehicles Combat Engineering (CEVs) agba. CS gas banye n'ụlọ ahụ na ịtọsa ụlọ ahụ. Rọketị yiri plastik ferret agba nwere CS ka a chụrụ n'ime ụlọ ahụ; ha meghere ma hapụ gas na mmetụta. Offọdụ n’ime ndị okenye ahụ nwere ihe ndị na-etinye gas. Enweghi nkpuchi gas buru ibu. Ndị nne na ụmụ ha, ndị gbara afọ iri na atọ na ndị nke atọ, na ụmụ nwanyị abụọ dị ime zoro n'ime ụlọ akwa, bụbu ebe ana-ewepu ibo ụzọ na ya; o nwere ọnụ ụzọ ghere oghe na ákwà e kegidere n'ala. Mwakpo ahụ malitere na 13: 6am Central Time. Ọkụ gbara ọkụ na 00: 12 pm Central Time.
N'ime minit 5 mgbe mwakpo ahụ malitere, ekwentị ekwentị ndị na-eme mkparịta ụka ahụ, nke na-aga n'ihu ala, gbubiri. Ndị ọrụ FBI kwuru na a tụpụrụ ekwentị n'ọnụ ụzọ nke obere oge onye ọchụnta ego FBI Byron Sage kpọchara na 6: 00am. Onye lanarịrị Graeme Craddock ekwuola na ekwentị ka dị ebe ọ na-anọkarị na ebe obibi; o kwuru na ọ bụrụgodị na ekwentị a tụbara n'èzí, ya nwere ike ijikọ ekwentị ọzọ. N'oge mwakpo ahụ Steve Schneider nọ na ebe obibi ahụ na-eduzi Pablo Cohen na Graeme Craddock ka ha pụọ ​​n'èzí iji hụ ma ha nwere ike idozi akara ekwentị. O kwuru na ha chọrọ ịgwa ndị FBI gbasara agam n’ihu e mere n’abalị ụnyaahụ maka ịdebanye ihe odide ahụ maka nkọwa Koresh na Akara Mbụ. Graeme Craddock pụrụ n'èzí wee wepụta akara ekwentị ahụ, na Byron Sage na igwe okwu na-ekwupụta na ndị ọrụ ahụ hụrụ na ọ gbajiri. Sage kwuru na a ga-eziga "ekwentị" ọzọ, mana enweghị mgbe ọ bụla. Nke a mechara Graeme Craddock kwupụtara na tankị agbajiri ekwentị ahụ na mbido mwakpo ahụ.
Na elekere 11:31 nke ụtụtụ, CEV ji ụgbọala gafee ụlọ ahụ iji gbaa mmanụ gas n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ ebe ụmụaka na nne nọ. Gas dị ebe a ruo 11:55 am. Dr. J. Phillip Arnold chetara na na nzụkọ ọgbakọ omebe iwu nke 1995, onye ọkwọ ụgbọ ala CEV kwuru na ya nwere ike ịhụ ndị nọ n'ime ụlọ ahụ. Ọkụ ahụ bidoro n’elekere 12:07 nke mgbede n’ụlọ nke abụọ.
Graeme Craddock gbara ama na ọ hụrụ onye na-awụ mmanụ, mana Pablo Cohen jụrụ na a wụsara ya n'ime ụlọ ahụ. Craddock kwukwara na ka ọ nọ na ala nke mbụ ọ nụrụ mkpu sitere na ụlọ nke abụọ wee mee ka ọkụ ahụ daa. Pablo Cohen tiri mkpu na ọ chọghị. Mkpu ozo si na ụlọ nke abụọ wee kwuo ka ọ ghara ịmalite ọkụ ahụ. Mkpu nke atọ wee daa site n'okpukpu ụlọ nke abụọ wee kwuo ka ọkụ, dị ka Craddock nụrụ. Army Col. Rodney Rawlings gwara onye nta akụkọ Lee Hancock na 1999 na ya na ndị ọrụ FBI nụrụ ụdịrị mkpu a na-ege na igwe onyunyo enyo. Ọdịdị ọdịyo nwere ụdị ọdịyo a nke ihe onyoonyo tụpụtara ka ndị FBI rụpụtabeghị.
Dr. J. Phillip Arnold na-arụ ụka na e nwere ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru kpatara ọkụ iji chebe ndị nke Chineke. Agbanyeghị ọkụ malitere na ebumnuche dị a ,aa, ịta ụfụ ụmụaka na nne bụ isi ihe gbanwere na mwakpo ahụ. Dr. Stuart Wright kwuru na CS gas na-abịa na ịdọ aka na ntị na a gaghị eji ya na oghere ndị ọzọ. Dr. Catherine Wessinger na-akọ na ndị ọrụ uweojii na New York bụ ndị gbara akaebe n'ihu kọmitii ọgbakọ na NYPD agaghị eji CS gas na isiokwu ndị metụtara ụmụaka. Havemụaka nwere obere ikike akpa ume ka ha wee nwee ike iguzogide mmetụta nke gas. CS gas na methylene chloride mmiri mmiri nke a na-ebute ya dị ọkụ.
Dr. Stuart Wright na-akọwapụta na ikwubiga okwu ókè nke ndị si n'ezi ofufe nke ATF nwere ike mee ka ndị ọrụ ATF jiri ike gabiga ókè na nnwale na-agba ume na February 28, 1993.
Nkebi nke 8. Olee Otu Anyị Ga-esi Ghọta Otu Okpukpe Ọhụrụ nke Ọma? (13:07 nkeji.)
Na Nkebi nke 8 nke Waco Branch nke Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụghị? ndị ọkà mmụta anọ ahụ na-atụle otú ọmụmụ ndị ọkà mmụta banyere mmegharị okpukpe ọhụrụ si eme ka esemokwu dị n'etiti ndị David David nke Alaka na ndị ọrụ gọọmentị etiti na 1993 yana banyere mmegharị okpukpe ndị ọzọ na-ese okwu. Ha na-ekwu na "òtù nzuzo dị mkpa" bụ echiche nke na-etinye ụta niile n'isi "onye ndu ụka" na ndị na-eso ụzọ ma ọ bụrụ na ime ihe ike emee na ndị mmadụ merụrụ ahụ ma gbuo. “Otu ihe di nkpa nke otu ndi mmadu” nke putara ihe nzuzo bu “ihe nzuzo” mechiri ka ihe ndi di otua ghara idi n’ime ihe omuma. Ndị ọkà mmụta ahụ na-atụle mmegharị okpukpe ọhụrụ ndị ọzọ ndị na-arụrịta ụka n'ụzọ ndị yiri ya n'oge na ebe ha nọ, gụnyere usoro Ndị Kraịst oge mbụ. A kọwara nkwuputa mmekọrịta ọha na eze bụ Dr. James T. Richardson banyere "akụkọ ifo nke onye isi kachasị ike" na ọ rụtụrụ aka na ndị ọrụ ATF na ndị FBI kwenyere na David Koresh nwere ikike zuru oke na ndị na-eso ụzọ, mgbe nke ahụ abụghị ikpe. "Akụkọ ifo nke onye isi kachasị ike" kwekọrọ na ihe Richardson kpọrọ "akụkọ ifo nke onye na-eso ụzọ, onye na-eso ụzọ ụbụrụ ya," nke bụ echiche na-eme ka ụlọ ọrụ ndị na-eso ụzọ ghara ikpebi ihe ha kwenyere na ma ọ ga-anọ na otu. O gosiputara na American Psychological Association kwubiri na “thesis brainhing” enweghi ezi ihe ndabere ma obu pseudoscientific. Ndị ọkammụta ahụ na-ekwukwa na onye Ọkammụta Agba Ọhụrụ bụ Dr. Eugene V. Gallagher rụtụrụ aka na ndị kwere ekwe apocalyptic na-atụgharịkarị akụkụ Akwụkwọ Nsọ ha anya site n’ihe gbara ya gburugburu, n’iburu n’ihe na-eme gburugburu ha na ha. Yabụ ozugbo nnọchibido nke ndị David David nke Alaka malitere na February 28, 1993, ọ bụghị nkwubi okwu emere tupu oge eruo banyere nnọchibido ahụ ga-akwụsị. Ọ bụrụ na ndị FBI belatara iji iwe eme ihe megide ndị David David nke Alaka ma ghara imebi mkparịta ụka ahụ na ndị David David, enwere ike izere ọnwụ nke ndị 76 gụnyere ụmụaka na Eprel 19, 1993.
Nkebi nke 9. FBI Agbaghara Ohere (31:28 nkeji.)
Na Nkebi nke 9 nke Waco Branch nke Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụtabeghị? ndị ọkà mmụta anọ na-atụle ihe ndị FBI na-akọwa / ndị ọkà mmụta sayensị na-akpa àgwà na ndị na-eme mkpebi FBI maara banyere nkà mmụta okpukpe apocalyptic nke Alaka nke okwukwe. Kedụ ka ndị ọrụ FBI ga - esi jiri oke nchegbu nke ndị David David iji dozie nnọchibido ahụ na enweghị ndụ? Ndị ọkà mmụta ahụ kwenyere na naanị otu ụzọ isi dozie nnọchibido ahụ n'udo bụ ichebara nkà mmụta okpukpe nke ndị Alaka David echiche na nchegbu kasịnụ. Ọ dị mkpa na ndị ọrụ FBI anaghị egbochi mmezu nke amụma ndị ahụ dịka Koresh kwupụtara ha.
Dr. J. Phillip Arnold rụtụrụ aka na n’etiti ọnwa Mach ya nọrọ na redio na-ekwu maka akàrà asaa nke akwụkwọ Mkpughe. Offọdụ ndị Alaka David nụrụ ya na redio, Steve Schneider, nwoke ziri ezi nke Koresh, rịọrọ onye mkparịta ụka ka Dr. Arnold soro ndị Sera na-akparịta ụka. Schneider kwuru na ọ bụrụ na Dr. Arnold nwere ike igosi site na amụma ndị dị na Bible na ndị David David nke Alaka kwesịrị ịpụta, ha ga-apụta. Ndị ọrụ FBI anaghị ekwe ka Dr. Arnold nwee mkparịta ụka na Koresh ma ọ bụ onye ọ bụla n'ime ụlọ ahụ. Nke a bụ nhọrọ enweghị nnwale.
Dr. Catherine Wessinger rụtụrụ aka na ọ bụghị naanị na ndị na-eme mkpebi FBI anaghị ege Dr. Arnold ntị, mana ha anaghị ege ndị na-akọwa profaịlụ / omume ha ntị.
Fọdụ ndị na-akparịta ụka ahụ hiere ụzọ site na ịtụ ihe ọmụmụ nke Koresh na nkwenkwe Ndị Kraịst ha wee kpebie na ọ naghị akụzi ihe ọ kwenyere n'ezie. Ndị ọrụ FBI ndị ọzọ hụrụ Koresh dị ka onye aghụghọ na-ekwenyeghị na nkà mmụta okpukpe ọ na-akụzi.
Mgbe ọnwụ 76 nwụrụ na Ugwu Kamel nke ndị David David na Eprel 19, 1993 sitere na tank na CS gas wakporo nke FBI, emere mgbanwe na nhazi nke ndị FBI ga-edozi "ihe dị egwu" n'ọdịnihu. Emepụtara otu Critical Incident Response Group (CIRG) iji nye echiche nke ndị na-eme mkparịta ụka FBI nha nha anya na onye ọchịagha nke ndị eji eji aha nnapụta; ìgwè abụọ ahụ kọọrọ onye isi CIRG n'oge ihe egwu dị egwu ka e wee nwee ike ịhazi mgbalị nke ìgwè abụọ ahụ, kama ndị ọrụ mgbapụta na-arụ ọrụ megide mkparịta ụka ahụ. A nwalere ụzọ a nke ọma na nguzo ya na Montana Freemen na 1996.
Dr. Stuart A. Wright na-ekwu na ọtụtụ ihe nkiri nke e mere na 2018 banyere Alaka Davidian na-adabere na stereotype simplistic. Fọdụ na-egosipụta akụkụ ndị dị mma nke obodo kama ilekwasị anya na mmekọrịta nke ndị ọrụ gọọmenti etiti na ndị David David. Anọ n'ime akwụkwọ akụkọ isii ọ tụlere na akwụkwọ 2019 Nova Religio etinyeghị echiche nke otu ọkà mmụta. Dr. James Tabor na-ekwu na ya na Dr. Arnold gbara ajụjụ ọnụ ọtụtụ maka ihe nkiri netwọkụ telivishọn abụọ, mana etinyeghị ajụjụ ọnụ ha.
Dr. Arnold kwuru na ndị David David nke Alaka kwenyere na ha nwere ọdịnihu mgbe ha ga-alaghachi n'ike na ebube. Ha ga-ahụrịrị n'ihi okwukwe ha ka nsụgharị gaa n'ógbè eluigwe. N’oge nnọchibido ahụ, ndị David Alaka nọ “na-echere Chineke.” Ha nọ na-eche ka ha hụ ihe Chineke ga-emere ha.
Ndị ọkà mmụta ahụ na-atụle otú obodo Davidian nke Alaka nwere ike isi tolite ma ọ bụrụ na mwakpo ATF emebeghị na February 28, 1993, nke kpalitere nnọchibido FBI na mwakpo ikpeazụ na Eprel 19, 1993. David Koresh nwere ike bụrụ onye na-eme ihe ịga nke ọma na ndị otu ya. Ọ kọwara abụ nkà mmụta okpukpe ya n'abụ. Dr. Arnold na-eche na David Koresh na ndị agha ya nwere ike ime na ememme 1994 Woodstock.
Ihe nkiri ahụ kwụsịrị na David Koresh na-eme abụ ya "Akwụkwọ Daniel." Ebe e si nweta ego ahụ gụnyere aha ndị nwoke, ụmụ nwanyị, na ụmụaka ndị nwụrụ na mwakpo ahụ na February 28, 1993 na Eprel 19, 1993, na ọnụ ọgụgụ nke ndị lanarịrị ọkụ ahụ. A na-akpọ aha ndị nile nwụrụ na ndị nwụrụ na afọ ha. Ihe nkiri ikpeazụ gosiri David Koresh ka ọ na-amụrụ ụmụ akwụkwọ ya ọmụmụ Bible.
Epilogue: David Koresh formrụ “Akwụkwọ Daniel” na Tekụziri Ndị Mmụta Bible Ya - Aha nke Ndị David David Alaka na 1993 (6:13 nkeji.)
The Waco Branch Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụtabeghị? mechie David Koresh na-abụ abụ ya bụ "Akwụkwọ Daniel." Ebe e si nweta ego ahụ gụnyere aha ndị nwoke, ụmụ nwanyị, na ụmụaka ndị nwụrụ na mwakpo ahụ na February 28, 1993 na Eprel 19, 1993, na ọnụ ọgụgụ nke ndị lanarịrị ọkụ ahụ. A na-akpọ aha ndị nile nwụrụ na ndị nwụrụ na afọ ha. Ihe nkiri ikpeazụ gosiri David Koresh ka ọ na-amụrụ ụmụ akwụkwọ ya ọmụmụ Bible.